एकल ह्यान्डल किचनको नल म्याट कालो बाहिर निकाल्नुहोस्
घर / भान्साको नल / किचनको नलहरू तान्नुहोस् / WOWOW एकल-ह्यान्डल पुल-आउट स्प्रेयर किचन नल
WOWOW एकल-ह्यान्डल पुल-आउट स्प्रेयर किचन नल
रेटेड 4.675बाहिर आधारित3मूल्यांकन ग्राहक
सुविधाको लागि, भान्साको नल उच्च चयन गरिएको हुनुपर्दछ, र पानी आउटलेट लामो हुनुपर्दछ। यो नाली माथि विस्तार गर्न उत्तम हो, र यसले पानी छर्कनु हुँदैन। यदि भान्छामा तातो पानी पाइप छन् भने, यस प्रकारको नल पनि डबल हुनुपर्छ। बिभिन्न उपयोग आवश्यकताहरू पूरा गर्न, तल तान्नुहोस् किचनको नल कालो सामान्यतया ° 360० rot घुमाउन सकिन्छ।
भान्साको नल बाहिर निकाल्नुहोस्
आश्चर्यजनक रूपमा किचनको नल बाहिर निकाल्नुहोस् विरलै दुर्लभ हुन्छन्। यस प्रकारको किन्च faucets शायद सबैभन्दा सानो भान्छा faucets तपाईं बजार मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अझै सम्म ती तपाईंलाई कार्यक्षमताको एक विशाल श्रृंखला प्रदान गर्दछ। WOWOW को पुल बाहिर किचेनको नलको मुख्य विशेषता भनेको लामो पानी नली हो जससँग तपाईं आफ्नो भान्साको डुink्गाको वरिपरिको कुनामा पुग्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी जब तपाईंसँग डबल किचन सिink्क हुन्छ, यसले WOWOW को भान्साको नलले तपाईंलाई सम्पूर्ण पहुँच प्रदान गर्दछ। अर्कोतर्फ किचिनको नल बाहिर पुग्ने छोटो टाउको। स्प्रे टाउकोमा टाउकोमा घरहरू, तर तपाईं यसलाई सायद याद गर्नुहुनेछ। तपाईं केवल ठूलो पानी नलीबाट लाभ उठाउनुहुनेछ।
किचिनको नलबाट बाहिर निकाल्ने अर्को ठूलो फाइदा भनेको अद्वितीय--सेक्सन डिजाइन हो जुन सबैभन्दा टिकाउ हो। किचनको नल3360० डिग्री घुम्न सजिलो छ। तपाइँको भान्सा सिink्कमा ठूलो पहुँच प्रदान गर्न बाहिर पुलको किन्चको नल पहिल्यै नै कम मात्र छ। यस तुलनात्मक रूपमा सानो पुल किचनको नलले कुनै पनि बाधा समात्दैन। तर तपाईले यस कुचिनको नललाई degrees 360० डिग्री बाहिर तान्न सक्नुहुन्छ, तपाईंसँग कुनै पनि अवरोध बिना, तपाईंको भान्साको सि sमा सबै समयमा पूर्ण पहुँच हुनेछ। यो संयन्त्र टिकाऊ सामग्री बाट बनेको छ, त्यसैले यो अनन्त पनि हुनेछ।
तेलले रमाईएको काँसाको भाँडा माझ्ने काँसाको नल
यस पुल आउट किचेनको नलको कालो फिनिस एकदम विशेष छ, र तपाईंले कुनै पनि भान्छा सजावटमा यस प्रकारको समाप्त धेरै भेट्नुहुने छैन। तपाईं आफ्नो भान्साको डिजाईन बरु अनौंठो बनाउन सक्नुहुनेछ यो रंगको रसोईको नलको साथ। WOWOW को पुल आउट भान्छाको नल तेल रबड काँसाको साथ समाप्त भयो। यस तरीकाले यो धेरै नै रेट्रो टेलिफोन जस्तो देखिन्छ। यसले तपाईंको भान्साको शैली निश्चित रूपले एक विशेष स्पर्श दिन्छ। कालो क्वार्ट्ज समाप्तको साथ, यसले तपाईंको भान्छामा पनि भव्यता दिन्छ। र पक्कै पनि यो टिकाऊ हो, त्यसैले तपाईंको भान्छाको नल एक लामो अवधिको लागि सुरक्षित छ।
तपाईंले आफ्नो भान्साको नलको बारेमा निर्णय गर्नु अघि, तपाईंले कुनै निर्णय गर्नु अघि निश्चित रूपमा गहिरो सोच्नु पर्छ। अनुसन्धानले देखाएको छ कि कुनै पनि भान्छाको मुख्य केन्द्रबिन्दु मध्येको भान्साको नल एक हो। तसर्थ, व्यक्तिहरूको ध्यान स्वचालित रूपमा तपाईंको भान्छाको नलमा तानिन्छ। यसले तपाईको भान्छाको नल बुद्धिमानीपूर्वक चयन गर्न भन्छ। यस्तो देखिन्छ कि तपाईले आफ्नो भान्साको नलको साथ ठूलो प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ। नतीजा, यसको अर्थ राम्रो तरीकाले, तर नराम्रो तरिकाले पनि। निश्चय नै तपाईले आफ्नो भान्साकोठालाई तपाईको भान्साको नलको साथ ठूलो उत्थान दिन सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ, जब तपाईं गलत निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो कुञ्जी सजावट पनि डाउनग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। WOWOW मा हामी तपाइँलाई तपाइँको भान्छा सजावटका लागि उत्तम भान्छाको नल प्रदान गर्न चाहन्छौं।
काफी मूल्य निर्धारण भान्साको नल बाहिर
जब तपाईं आफ्नो रसोईको डिजाइनमा धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, तपाईं चाहनुहुन्छ सबै कुरा ठीक छ। तपाईं आफ्नो सपनाको किचन, तपाईं सँधै सपना देख्नुभएको भान्साको निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईंको सपनाको भान्सा बनाउन, तपाईंको सुरुको भान्छाको डिजाइनमा तपाईंको भान्साको नलहरू समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। जैसा कि उल्लेख गरिएको छ, एक भान्साको नल तपाईको भान्छाको डिजाईनको अभिन्न हिस्सा हो, र त्यसैले सुरुदेखि नै समावेश गरिनु पर्दछ। यद्यपि धेरै किचन डिजाइनरहरूले तिनीहरूलाई समावेश गर्दैनन्, र यस वस्तुलाई तपाईं अलग छोड्नुहोस्। जहाँसम्म कि तपाईंको भान्साको नल राम्रोसँग छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ तर तपाईंको भान्सा सजावटको साथ अभिन्न हिस्सा बनाउन यो महत्त्वपूर्ण छ।
अर्कोतर्फ, एउटा किचनको नल तपाईको भान्साको डिजाईनमा समावेश छैन भन्ने तथ्यले तपाईंलाई फाइदा पुर्‍याउँछ: तपाईं बजारमा प्राप्त गर्न सक्ने पैसाको लागि उत्तम मूल्य छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो किचन पुनर्विक्रेतामा निर्भर हुनुहुन्न जसले तपाईंको कुचिनको नलको दाम खुशीसँग डबल वा ट्रिपल गर्दछ। जब तपाईं स्वयं भान्साको नल चयन गर्नुहुन्छ, तपाईं आफूले चाहानु भएको भान्साको नललाई ठ्याक्कै चयन गर्न सक्नुहुनेछ। WOWOW मा तपाइँ तपाइँको पुल बाहिर किचनको नलको लागि उचित मूल्य तिर्नुहुन्छ, र त्यसैले तपाइँ र तपाइँको वालेटको लागि उत्तम विकल्प हो।
पानीको प्रवाहले भान्छाको नल बाहिर निकाल्छ
यसले WOWOW को भान्साको नल बाहिर निकाल्छ पर्याप्त पानी प्रवाह दुई पानी मोड सुविधा: प्रवाह र स्प्रे। यी पानी प्रवाह मोडहरूको साथ तपाईं या त धुनुभयो, भर्न सक्नुहुनेछ, वा तपाईंको भान्साको सिink्कमा आईटमहरू धुनु। पुल आउट किचनको नल एक नवीन अभिनव एबीएस एरेटरको साथ पोष्ट गरिएको छ, यसले एक सहज र स्थिर पानीको प्रवाहको ग्यारेन्टी दिन्छ। यसका साथै यस विशेष सुविधाले तपाईंलाई धेरै पानी खपत पनि बचाउँछ। यस एयरेटरले तपाईलाई पानीको of०% बचत गर्छ जुन तपाईले आफ्नो पानीको बिलमा अवश्य देख्नुहुनेछ। Aerator मात्र हटाउन सकिन्छ, या त सफा गर्न वा प्रतिस्थापन गर्न।
यसबाहेक, यस उच्च-गुणस्तरको पुल आउट किचेनको नल स्टेनलेस स्टील कोटिंग, र स्टेनलेस स्टीलको पानीको नलीको साथ ठोस ब्रास कनेक्टरबाट बनेको हुन्छ। यी उच्च-गुणवत्तायुक्त सामग्रीहरूको कारणले, पुल आउट किचेनको नलले खिया र क्षतिहरूको प्रतिरोध गर्न सक्दछ। सिरेमिक कार्ट्रिज ड्रिपमुक्त छ तपाईलाई यो भान्छाको नल प्रयोग गरी अन्तिम आराम प्रदान गर्न। जस्तो कि पानीको नली पनि स्टेनलेस स्टीलको बनेको छ, यसले एक विरोधी विस्फोट सजावट प्रदान गर्दछ र लगाउँदैन र टुसाउँदैन। यो पानीको नली सधैं सजीलो यसको मूल स्थितिमा फिर्ता लिन्छ। यसले कुनै समस्या बिना उच्च पानीको चाप खडा गर्न सक्छ।
वारेन्टी किचनको नल बाहिर निकाल्नुहोस्
यो महान पुल आउट किचन नल पनि व्यावसायिक प्रयोगको लागि लागू छ। यसको अपवादात्मक कालो क्वार्ट्ज समाप्तको कारणले, यसले सजीलो खिया र खरोंचको सामना गर्न सक्छ। त्यसकारण यसले लामो समयदेखि चल्ने गुण प्रदान गर्दछ। नतिजा स्वरूप, WOWOW ले तपाईंलाई5बर्षे वारंटी अवधि प्रदान गर्न पनि सक्षम छ। धेरै जसो किचन फालहरूको आपूर्तिकर्ताले मात्र १ बर्षे वारंटी अवधि प्रदान गर्दछ, WOWOW यहाँ निश्चित रूपमा फरक पार्छ। WOWOW सबै उद्योग मापदण्डहरु भन्दा पर जान्छ, र कि तपाइँ यस कुञ्जी कोठाको नल को हरेक पक्ष मा याद गर्नुहोस्। तपाईंको पुल आउट किचेनको बीमा साथै 1 ०-दिनको मानकी पैसा फिर्ता ग्यारेन्टीद्वारा बीमा गरिएको छ। यस तरिकाबाट तपाई कुनै ठूलो जोखिम यस महान किचन नलको साथ चलाउनुहुन्न। संक्षेप मा भान्साको नल को बाहिर को लाभहरु: any कुनै पनि भान्छामा एक वाह-कारक दिन्छ
Ressive प्रभावशाली रेट्रो कालो तेल कांस्य समाप्त मलाई
Imal न्यूनतम डिजाइन
G व्यावहारिकले पानीको नली निकाल्नुहोस्
High उच्च गुणस्तरीय ब्रास र स्टेनलेस स्टील सामग्रीबाट बनेको
SKU: 2310501Q विभाग: भान्साको नल, किचनको नलहरू तान्नुहोस् टैग: भान्सा सिink्क नल, एकल ह्यान्डल पुल, स्प्रेयर किचन
16.8 x 11.4 x 3.5 इन्च
स्प्रेयर बाहिर तान्नुहोस्
स्टीम र स्प्रे प्रकार्य
पी *** आर2021.02.09
यस स्प्रेयर बाहिर तान्न संग, यो भाँडा वा भाँडा माझ्ने धेरै सुविधाजनक छ। यो रंग रमाईलो छ, र दाग वा फिंगर प्रिन्ट प्राप्त गर्न सजिलो छैन। मलाई लाग्छ कि म मेरी आमाको लागि अर्को किन्नेछु।
कस्तो राम्रो नल! हाम्रो भान्छाको झ्यालको अगाडि हामीसँग धेरै नै नल थियो। हामीले भर्खरै आन्तरिक शटरहरू थपेका छौं र कम प्रोफाईल नलको आवश्यक पर्दछ। यो उत्तम थियो र ठोस र भारी शुल्क टुक्रा हो। मेरो hubby (जो कुनै पनि स्थापना गर्न सक्दछ) यो स्थापित गर्न को लागी सुपर सजिलो थियो र हाम्रो पहिलेको नल भन्दा स्थापना गर्न धेरै सजिलो थियो। मलाई कालो फिनिश मनपर्दछ र यो हाम्रो स्टेनलेस स्टील सिink्कसँग अद्भुत देखिन्छ। हामी धेरै खुसी छौं र निश्चित रूपमा फेरि किन्नेछौं। मलाई चिन्ता थियो कि यो एकदम सानो देखिए पनि यो एकदम राम्रो देखिन्छ! एक महान, भारी शुल्क र राम्रो बनाएको उत्पादन को लागी धन्यवाद! र मूल्य गजबको छ!
एल *** ए2021.05.18
राम्रोसँग बनाइएको भारी शुल्क नल, यसको सि aको वरिपरि पुग्न पर्याप्त नली हुन्छ, यससँग ह्यान्डलको माथि स्प्रे / फ्लो बटन पनि हुन्छ ताकि तपाईं स्विच गर्न सक्नुहुनेछ। नलीको तलको वजन (सिink्क अन्तर्गत) नलीलाई फिर्ता लिन सजिलो बनाउँदछ (नलीलाई फेरि ठाउँमा ठाँउमा धकेल्दैन)। म यो खरीदसँग खुसी छु ...